Nanainga ny fitsipiky ny fitokana-monina ho an'ny mpitsidika avy any amin'ny firenena 24 i Litoania
Home » Toerana fitsangatsanganana » Nanainga ny fitsipiky ny fitokana-monina ho an'ny mpitsidika avy any amin'ny firenena 24 i Litoania
Fanalefahana ny fepetra fanidiana, ny governemanta ny Litoania nanaiky fa ny mpitsangatsangana avy any amin'ny firenena eoropeana 24 dia tsy iharan'ny fanokanan-tena mandritra ny 14 andro rehefa tonga.
Tamin'ny 15 May, nesorina ny fameperana tamin'ny fahatongavan'ireo teratany Latvian sy Estonianina ary mponina.
"Ny hetsika, antsoina hoe" Baltic Travel Bubble ", dia fahombiazana ary tsy nisy fiatraikany ratsy tamin'ny tahan'ny aretina tany amin'ireo firenena telo ireo. Ankehitriny, misokatra ho an'ny raharaham-barotra sy fitsangatsanganana ho an'ny mponina any amin'ny firenen-kafa i Litoania, izay heverin'ny governemanta litoanianina fa azo antoka amin'ny valan'aretina ”, hoy i Dalius Morkvėnas, Tale Mpitantana ny Travel Lithuania Travel, masoivoho nasionaly fampandrosoana ny fizahantany.
Nesorina ny fameperana ho an'ireo olom-pirenena sy mponina monina ara-dalàna ao amin'ny firenena any amin'ny faritra ara-toekarena eoropeanina, Suisse, ary ny Fanjakana Mitambatra, izay tonga avy amin'ny iray amin'ireo firenena ireo, raha nisy ny tranga Covid-19 ao amin'ny firenena onenan'izy ireo ara-dalàna dia latsaky ny 15 ny isan'ny / 100 000 mponina tao anatin'ny 14 andro lasa. Ny didy navoakan'ny Komandem-panjakana misahana ny asa vonjy taitra nasionaly Aurelijus Veryga dia manan-kery amin'ny 1 Jona.
Ny "lisitra azo antoka" amin'izao fotoana izao dia misy an'i Alemana, Polonina, Frantsa, Italia, Failandy, Norvezy, Danemarka, Austria, Bulgaria, Kroasia, Sipra, Repoblika Tseky, Estonia, Gresy, Hongria, Islandy, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, ny Netherlands, Romania, Slovakia, Slovenia, ary Soisa.
Ireo mpitsangatsangana avy any Irlandy, Malta ary Espana (izay misy tahan'ny aretina mihoatra ny 15 saingy tsy latsaky ny tranga 25/100,000 14 ny isan'ny olona) dia afaka miditra ao Litoania, saingy iharan'ny fe-potoana mitokana irery mandritra ny XNUMX andro.
Mbola voarara ny fivezivezena avy any Belzika, Suède, Portugal, ary UK, izay mihoatra ny tranga 19 / 25 ny isan'ny tranga COVID-100,000. Ny olom-pirenena litoanianina miverina avy amin'ireo firenena ireo dia tsy voarara amin'ity fandrarana ity.
Ny lisitr'ireo firenena izay misokatra ny sisintanin'i Litoania dia havoaka isaky ny Alatsinainy avy ao amin'ny State Commander of National Emergency Operations.
Ny Lithuania dia teo ambanin'ny quarantine nanomboka ny 16 martsa, nanamaivana tsikelikely ny famerana satria nidina ny tahan'ny aretina. Lituania dia manohy ny sidina mahazatra mankany Latvia, Estonia, Alemana, Norvezy ary Netherlands. Misy ny drafitra hanohizana ny sidina mankany Danemark sy Failandy amin'ny herinandro ho avy.
Tsy takiana intsony ny olona manafina ny tarehiny eny ivelany; trano fandraisam-bahiny, kafe, trano fisakafoanana ary trano hafa dia misokatra ho an'ny orinasa; Ny hetsika ivelany sy anatiny dia avela voafetra ny isan'ny mpijery. Ny fitondrana quarantine dia mbola manan-kery hatramin'ny 16 jona.
“Noho ny haketran'ny isam-poninay ambany sy ny toerana mahaliana antsika dia tsy voafetra ho an'ny tanàna iray fotsiny, dia tsy toerana be olona mihitsy izahay. Azoko antoka fa amin'ity taona ity i Litoania dia afaka manolotra karazana fialantsasatra milamina sy mahasalama, manambatra ny fizahana ny natiora sy ny fizahan-tany ara-kolontsaina, izay mendrika sy maniry mafy ny maro eran'izao tontolo izao, ”hoy i Dalius Morkvėnas, Tale mpitantana ny fitsidihan'i Lituania Travel.
Raha ny tatitry ny World Economic Forum T&T Competitiveness Report dia manana isa naoty ambony indrindra eran-tany i Lituania (6.9 amin'ny 7) ho an'ny fahasalamana sy fahadiovana.
Tamin'ny 29 May, ny firenena dia 1662 no nanamarina tranga COVID-19, izay 1216 no tafarina. Lithuania dia nanoratra fahafatesan'olona 68 nateraky ny COVID-19. Ny totalin'ny santionany nosedraina dia 300,000. Ity dia mihoatra ny 10% amin'ny mponina any Litoania.
Misokatra indray ho an'ny mpizahatany i Florida Keys
Ny hotely sy ny hotely an'arivony taona dia mandray ireo vahiny hankalaza ny fialantsasatra